Waa kuwee Macalimiinta ugu Mushaarka Badan? | 10ka Shaqo ee Tababarka Mushaarka ugu Sareeya
Bogga ugu weyn Waa kuwee Macalimiinta ugu Mushaarka Badan? | 10ka Shaqo ee Tababarka Mushaarka ugu Sareeya 2022
Waa kuwee Macalimiinta ugu Mushaarka Badan? | 10ka Shaqo ee Tababarka Mushaarka ugu Sareeya 2022
isha sawirka: pixabay
Dunidu waxay mar walba u baahan doontaa macalimiin. Laga soo bilaabo macalimiin u sameeya jacaylkeeda ilaa kuwa qaata lacagaha waaweyn si ay u helaan waxyaalahooda iyaga ah, ugu dambeyntii, qof kastaa wuxuu rabaa wax. Macallinka waxaa halkan lagu tilmaami karaa inuu yahay shaqsi siinaya qof kale ama koox dad ah wax barasho.
Markaa, macalinku waxa uu tilmaamaa waxyaalaha ku habboon in qofku sameeyo. Rajada umeerinta ayaa ah in qofku uu si aad ah u korayo oo uusan u baahnayn umeerin, taas oo macnaheedu yahay in qofku uu noqdo qof madax-bannaan oo go'aan ka gaari kara iskiisa.
Faa'iidooyinka umeerinta sidaan horeyba u taabtay waxay ku imaan kartaa noocyo badan oo umeerin ah iyo qofka wax baraya. Maqaalkani waxa uu qeexayaa macalimiin kasta oo la sifayn karo iyo isku dayga lagu sameeyo xidhiidhka ka dhexeeya waxaa loo adeegsaday shaqo sare, shaqo abaal-marin yar, ilaa shaqooyinka umeerinta ugu mushaarka badan adduunka. In kasta oo aynaan si dhab ah u garanayn waxa la garanayo oo dhan, waxaan hubaal ahaan isku dayi karnaa inaan ogaano macallimiinta ugu mushaarka badan.
Maxaynu Ugu Bahanahay Tababarayaal?
Muddo aad u dheer, umeerin ayaa jirtay. Ma aha nooca shayga u baahan sharraxaad badan. Carruurta hodanka ah ee Giriigii hore, intii lagu jiray xilligii Plato iyo Socrates, waxay wax ku barteen si gaar ah ama kooxo yaryar by sayidyo ama macalimiin. Tababarayaashu waxay sii wadeen inay wax baraan carruurta aristocrat iyo taajiriinta ilaa qarniyadii dhexe.
Macallimiintu waxay bilaabeen inay wax baraan markii machadyo waxbarasho oo dhisan la heli karo, laakiin macallimiintu waxay ku hareen inay qayb lama huraan ah ka qaataan habka waxbarashada. Tababarayaal ayaa mar keliya diyaar u ahaa ardayda ka hodansan.
Ardaydu waxay hadda ka heli karaan barnaamijyada umeerinta ee dugsiyadooda, kaniisadaha, iyo wakaaladaha bulshada, iyo sidoo kale ganacsiyada umeerinta gaarka ah.
Sidee Lacag U Sameeyaan Macalimiinta Sare?
Macalimiinta sare lacag uma sameeyaan si ka duwan macalimiinta kale. Waxa jira dhawr farqi oo muhiim ah oo kala saara kuwa qaata lacagaha waaweyn ee macalimiin ahaan iyo kuwa aan wax badan ka qaadan shaqada;
Habka uu macalinku isu calaamadiyo ayaa noqon kara qodobka qeexaya sida uu u kasbado. Kuwa aqoonta u leh summaynta iyo quudinta dabaqad dad gaar ah, shaqada inteeda kale waa u fududahay. Ilaa hadda inta aad bixiso natiijooyinka ugu fiican ka dib calaamadayntaada, dadka qaar dhib kama qabaan inay bixiyaan si ay u helaan waxa ugu fiican. Su'aashu hadda waxay tahay, "maxaad bixin lahayd si aad u hesho macallin caan ah ama mid ka mid ah macallimiinta ugu mushaarka badan?" Halka qaar ka mid ah, aysan wax badan ka beddelin in la haysto macalin caan ah, qaar kale, waxay ula jeedaan adduunka iyaga ka dibna dabcan macallimiinta caanka ah kuwaas oo ah waxa ay yihiin sababtoo ah adigu ma caawin kartid naftaada.
Qofka La Barayo
Tani waa qayb kale oo muhiim ah oo si sahal ah loo dayacay. Yaa wax la baraa inta badan waa arrin ka sii qeexan sida aad u kasbato marka loo eego calaamadayntaada, in kasta oo ay u muuqdaan in ay wada socdaan. Aan soo qaato tusaale ahaan qofka wax u dhiga carruurta Elon Musk. Elon Musk wuxuu bilaabay dugsi aan lahayn qaab dhismeedka fasalka dhaqameed ee waxbarashada aasaasiga ah ee Maraykanka kaas oo la yiraahdo Xayeysiiska Ast Astra. Tani waxay ku salaysan tahay rumaysadkiisa "Haddii aad rabto inaad barato carruurta sida matoorada u shaqeeyaan, ayuu yidhi, ma rabi doontid inaad marka hore barato wax ku saabsan wrenches iyo dhammaan wixii ku saabsan screwdrivers. Waxaad tusi lahayd mishiinka, oo waxaad waydiin lahayd sida ay u kala saarayaan. Kadibna shay aad muhiim u ah ayaa dhacaya, taas oo ah in ku habboonaanta qalabku ay muuqato."
Maxaa La Barayaa
Muhiimadu waa in ay noqon karto wax kasta, oo haddii ay taasi muhiim u tahay qofka wax bixinaya, waxay sidoo kale bixin karaan inta ay awoodaan. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'ad umeerin caalami ah, Andrew Knight, ayaa arinkan caddeeyey markii uu yidhi "waalidiinta hodanka ah waxay mararka qaarkood ka qabaan rajooyin aan macquul ahayn macallimiinta, gaar ahaan marka ay timaaddo inay ka caawiyaan carruurtooda inay galaan kulliyadaha ugu fiican ama ay helaan darajooyin sare. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa loo bartay inay bixiyaan wax kasta oo ay rabaan oo ay ku jiraan macallimiinta ugu mushaarka badan,” Knight ayaa yidhi. "Ma fahmaan inaan dammaanad qaadi karin GPA ama kulliyad gaar ah."
Sidoo kale, Eeg Sida Looga Mushaareeyo Macallinka Online 2022 | 20ka Shabakadood ee ugu Wanaagsan ee Si fiican u bixiya
Waa kee Macallinka ugu Qaalisan?
Yaa ah macalinka ugu qaalisan adduunka hadda ayaa laga doodi karaa sababo badan dartood. Sicir bararka ugu horreeya, ka dibna kuwa kale sida heerka nolosha iyo sida meesha aad ku nooshahay iyo sida ay u saameeyaan sida laguu siiyo. Dunidu waxa ay gaadhay heer ay inta badan macallimiinta fog-fog ee mushaharka sare qaata aanay soo bandhigin inta ay helayaan sababo shakhsi ahaaneed.
Sannadkii 2013, waxaa la diiwaan geliyay in mushaarka caadiga ah ee macalinka waqti-buuxa ah maanta uu kor u kacay inta u dhexeysa $70,000 iyo $120,000 iyadoo ku xiran shuruudaha. Laakin Tutors International ayaa meel dhigtay hal macalin oo qaata $400,000 sanadkii iyo mid kale oo la siiyay $80,000 kaliya 16 todobaad oo shaqo ah..
Mushaharkooda, macallimiinta badankoodu waxay sidoo kale caadi ahaan helaan guriyo bilaash ah, baabuur ama darawal, safar iyo cunto lacag ah, iyo mararka qaarkood xitaa cunto kariyaha khaaska ah iyo kaaliyaha gaarka ah.
10ka Shaqo ee Tababarka Mushaarka ugu Sareeya
Waa kuwan macallimiinta ugu mushaarka badan:
Macalimiinta Mawduuca Gaarka ah
Macalimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Saraakiisha Sare ee Tacliinta ee Xarumaha Tutoring
Milkiilayaasha Adeegyada Tutoring
Maareeyayaasha xarumaha wax dhigista
Isku duwaha waxbarashada
Macalimiinta qaangaarka ah
1. Macalimiinta Mawduuca Gaarka ah
Macalimiintan gaarka ah waxay noqon karaan kuwo khadka tooska ah ama khadka tooska ah ka caawiya ardayda inay horumariyaan dhinac kasta oo noloshooda manhajka ka baxsan ah. Tani waxay noqon kartaa barashada sida loo ilaaliyo jirdhiska, sida loo sameeyo muusik xirfadaysan, ama sida xirfadaysan loo maamulo hubka. Waxay noqon karaan wax kasta, laakiin wax kasta oo ku lug leh isticmaalka karti gaar ah ama caqli gaar ah oo la bari karo ama la tababari karo waxay u baahan yihiin in macalinka si fiican loo siiyo waxa aad qabato.
Sida mid ka mid ah macallimiinta ugu mushaharka badan, waxaad heli kartaa inta u dhaxaysa $250,000 ilaa $360,000 ama xitaa ka badan.
2. Macalimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Macalimiinta waxbarashada gaarka ah waxay noqon karaan kuwo online ama offline ah kuwaas oo ka caawiya ardayda inay wax ku bartaan maadooyin ama mawduucyo kala duwan. Inta badan macalimiintaan waxbarshada waxay leeyihiin xirfado shaqo oo macalimiin shahaado haysta ama xataa macalimiin ka ah machadyada sare. Macalimiintani meelba meel bay ku kala duwanaan karaan, iyadoo ku xidhan meesha aad ku nooshahay.
Waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $250,000 ilaa $300,000 iyo xitaa wax ka badan laakiin waxay ku xidhan tahay arrimo kale oo aan soo sheegnay.
3. Saraakiisha Sare ee Tacliinta ee Xarumaha Tutoring
Saraakiisha sare ee tacliinta waa agaasimayaasha waxbarashada kuwaas oo qorsheeya oo isku dubarida barnaamijyada waxbarashada ee xarumaha umeerinta. Xarumahan waxbarasho waxay bixiyaan umeerin su'aalaha ugu dambeeya iyo sidoo kale baahiyaha waxbarasho ee socda. Xaaladaha qaarkood, ardayda dhigata dugsiga fasalka waxay heli karaan umeerin bilaash ah xarumaha maxalliga ah ama waxay heli karaan dhibcaha fasalka ka qaybgalka casharrada.
Shaqadan, waxaad ku kasbatay inta u dhaxaysa $92,622 ilaa $158,000.
4. Milkiilayaasha Adeegyada Tutoring
Mulkiilaha adeega waxbarid ahaan, waxa aad qabataa hawlo kala duwan oo maamul iyo tacliin, iyo maamul. Dakhligaagu wuu kala duwan yahay iyadoo loo eegayo khibradaada, shahaadooyinkaaga, waajibaadkaaga, iyo goobta takhasuska. Iyadoo qiimaha macalinka gaarka ah uu kala duwan yahay iyadoo ku xiran heerka khibrada, adeegyada umeerintu waxay caadi ahaan bixiyaan qiime go'an oo hufan ee casharrada umeerinta.
Qiimaha mushaharka macalinka khadka ayaa ku kala duwan iyadoo ku xiran goobta aad isticmaalayso. Waxaad heli kartaa $158,130 ilaa $200,710 sanadkii.
5. Maamulayaasha xarumaha wax dhigista
Waxaad qabataa waajibaad maamul ama tacliin ama labadaba iyo door la-talin macallimiinta, shaqaalaha, iyo ardayda adoo si taxadar leh u fiirsada, horumarinta, iyo la socodka waxqabadka, tilmaamaha, iyo barnaamijyada. Qaar ka mid ah shirkadaha umeerinta waxay qaadaan khidmadaha is-diiwaangelinta halka kuwa kalena ay qaadaan kaliya qiimaha saacadii.
Inta badan wakaaladaha wax dhigista internetka uma baahna qandaraas wakhti dheer ah, in kastoo laga yaabo in lagugu xidho qandaraas bille ah haddii aad doorato qorshe bille ah oo qiimo dhimis ah. Kuwanu waa nimanka go'aamiya inta ay le'egtahay inta ugu badan ee dadka shirkadu ka kooban tahay. Maamule xarun umeerin ahaan, mushaharkaagu wuxuu u dhexeeyaa $89,406 ilaa $150,000.
6. Isuduwayaasha Waxbarashada
Isku duwaha waxbarashadu wuxuu caawiyaa in uu baaro oo horumariyo manhajka iyo sidoo kale, kor u qaada xirfada iyo ku dhaqanka anshaxa ee barayaasha. Ku-tiirsanaanta xogta la ururiyo iyadoo la kormeerayo lana qiimeeyo horumarka ardayga, isku-duwayaasha waxbarida ayaa mas'uul ka ah hababka qiimeynta rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn si loo qorsheeyo waxbarashada.
Intaa waxaa dheer, isku duwaha waxbarida ayaa kormeera hirgelinta manhajka iyo halbeegyada, oo dib u eegis iyo ku taliyaa buugaagta iyo agabka waxbarashada ee macallimiinta haddii uu jiro urur u jiheeya macallimiinta.
Isku-duwaha Waxbarashada ahaan, waxaad kasban kartaa $76,600 ilaa $120,000.
7. Barayaasha Luuqadaha
Macalimiinta luqadaha ee khadka tooska ah iyo kuwa khadka tooska ah ayaa si xoog leh looga doorbiday ugu yaraan shahaadada koowaad ee jaamacadda ee goobta ay xiisaynayaan umeerinta, shatiga waxbaridda, iyo/ama shahaado takhasuska ama takhasuska leh (sida TESOL ee macalimiinta ESL, iyo wixii la mid ah) . Tani waxay ku xiran tahay gobolka ama dalka aad umeerin dabcan iyo waxa looga baahan yahay; xitaa ma jiri karaan wax shuruudo ah sababtoo ah macalimiintu waa la shaqaaleysiin karaa aqoontooda oo keliya.
Macalimiinta mustaqbalka ah waxay maraan "xaqiijinta," oo ay ku jirto baaritaanka asalka - tani waxay sidoo kale ku xiran tahay shirkadda aad u shaqeyso haddii aanad xor u ahayn.
Waxaad ku kasban kartaa dakhli u dhexeeya $70,000 ilaa $100,00.
8. Macalimiinta qaangaarka ah
Marka laga soo tago baritaanka dadka waaweyn xirfadaha aasaasiga ah ee shaqada ama waxbarashada aqoonta sida akhriska, qorista, iyo Ingiriisiga, macallimiinta qaangaarka ah waxay sidoo kale caawiyaan ardayda ka tagtay dugsiga iyaga oo yar si ay u masruufaan qoyskooda, u helaan shaqo ama sababo kale dartood- u dhammaystiraan u dhigmadooda dugsiga sare. barnaamijka diblooma.
Macalimiinta qaangaarka ah ayaa ah u doodeyaal muhiim u ah inay ku abuuraan kalsoonida iyo xirfadaha kuwa aan fursad u helin inay dhammaystiraan waxbarashadooda aasaasiga ah iyo u diyaargarowga goob shaqo oo degdeg ah.
Waxaad kasban kartaa mushahar u dhexeeya $ 41,600 ilaa $ 83,960 iyo xitaa inbadan oo ku saleysan Hay'adda, khibradaada, u qalmiddaada, iyo maalgelintaada.
9. Macalimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Tababarayaasha Waxbarashada Gaarka ah waxay bixiyaan tilmaamo dhallaanka, carruurta, iyo kurayda qaba naafo maskaxeed, shucuureed, ama jireed. Sababtoo ah wali waxay ahayd mamnuuc in laga hadlo naafada meelo badan, ereyga afka ee dadka "in la yaqaan" waxay ahayd mid ka mid ah hababka dhowrka ah ee lagu ogaado macallimiinta baahiyaha gaarka ah ee shahaadaysan, xitaa taasi had iyo jeer ma shaqeyn.
Nasiib wanaag, umeerinta baahiyaha gaarka ah ayaa si degdeg ah u horumaray tobankii sano ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan tignoolajiyada caawinta, umeerinta gaarka ah, iyo daaweynta xirfad nololeed ee sareeysa.
Macallinka baahiyaha gaarka ah ayaa habeeya manhajka lagu bixiyo fasalka caadiga ah ee ilmahaaga si uu u buuxiyo shuruudaha waxbarashada gaarka ah. Helitaanka umeerinta baahiyaha gaarka ah ka hor inta aan la bilaabin internetka iyo shabakad caalami ah oo isticmaalayaasha ayaa ahayd mid adag, haddii aysan suurtagal ahayn, xaaladaha qaarkood, laakiin hadda waa la heli karaa waana wax fiican.
Tababarayaasha Waxbarashada Gaarka ah, waxaad kasban kartaa $40,480 ilaa $70,500.
10. Caawinayaasha Tutors
Mas'uuliyadaha kaaliyeyaasha macalinka waxaa badanaa lagu go'aamiyaa heerkooda. Kaaliyaha macalinka heerka sare ah, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in uu u qalmo buuxinta macalinka marka la waayo, marka lagu daro dhamaystirka mas'uuliyadaha maamulka aasaasiga ah.
Da'da tacliintu waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa mas'uuliyadda caawinta macalinka. Haddii kaaliyaha umeerin uu la shaqeeyo ardayda dugsiga barbaarinta, tusaale ahaan, waxay kormeeri doonaan iyaga inta lagu jiro ciyaarta ama nasashada. Si kastaba ha ahaatee, waxay diiradda saari doonaan abuurista qorshooyinka casharrada, u diyaarinta agabka fasallada, iyo kaalmaynta waxbaridda hagaajinta haddii ay taageeraan macallin umeeriya macallinka dugsiga sare.
Waxaad ku kasban kartaa doorkan meel kasta laga bilaabo $38,740 ilaa $65,360 ama ka badan taasoo ku salaysan go'aamiyeyaal kale.
Waayo-aragnimada macallimiintu way ku kala duwan yihiin iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay leeyihiin waayo-aragnimo gebi ahaanba ka duwan kuwa kale. Sida cad, macalimiin mushaharka ugu sarreeya ayaa laga filayaa inay yeeshaan khibrado aan isku heer ahayn kuwa qaata mushahar yar.
Umeerintu waxay u dhaxaysaa gacan-qabsiga iyo ilaalinta xabsiga hal daraf oo cabbirka ah, iyadoo dadka aniga oo kale ah loo xilsaaray doorka ilmo-ilaalinta la ammaanay: Waxaan si qarsoodi ah u akhriyay Instagram-ka anigoo hubinaya in dhammaan shaqada dugsigu ay ku dhammaatay waqtigii loogu talagalay iyo khalad la'aan dhinaca kale.
Dhanka kale, waxa la igu dhiirigeliyay in aan raaco hab bini'aadminimo oo xoogga saaraysa fikirka muhiimka ah iyo is-sahaminta. Umeerinta habka Renaissance waxay ballan-qaadaysaa in aad u qaabaynayso cunugga nooca da'da yar ee adiga - ama, si ka sii weyn, sarkaalka oggolaanshaha jaamacadda - aad rabto inaad fadhiiso ag fadhiiso xaflad casho ah.
Chapman.edu – Waxa umeerintu tahay iyo waxa aanu ahayn umeerin
Online.se.edu – Muxuu Sameeyaa Isku-Duwaha Waxbarashadu?
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Tababarid 2022 | Tusaha Khubarada
Intee in le'eg ayay tahay in Ardayga Kulliyada ahi uu wax ka bixiyo 2022?
Shaqooyinka Wax -barashada ugu Fiican ee Onlineka ah ee La Heli Karo 2022
Kaarka deynta Vs. Kaarka Debit: Farqiga, Waxyaalaha Ay Ka Mid Yihiin, Iyo Sida Ay U Shaqeeyaan
Lacag ku bixi si aad ugu xayeysiiso Baabuurkaaga: 7 Shirkadood oo ku siin kara 2022
10ka Kufsi ee ugu Mushaharka Badan iyo Lacagtooda Hantida | 2022
Rappers waxaa lagu yaqaanaa guryo waaweyn, baabuur qaali ah, iyo kharashyo xad dhaaf ah, wayna fududahay in la arko sababta…
43 Qodobbada Awoodda Leh ee Ku Saabsan Bixinta 2022 -ka
Bixinta waa inaad si ikhtiyaari ah u soo bandhigto ama aad wax u bixiso. Siinta bixiyaha ma filayso wax soo laabasho ah. Waxay…
Mushaharka Vs Shaqaalaha Saacadda: Farqiga Iyo Waxyaabaha La Midka Ah
Ma waxaad raadineysaa inaad wax badan ka ogaato shaqaalaha mushaharka iyo saacadaha saacadaha shaqada? Shaqaalaha waxaa loo kala saaray iyadoo lagu salaynayo...
18 Siyaabood oo Si Fudud Looga Dhigo Qof Qosol Mar Walba
Ma ogtahay in ay masuuliyadeena tahay in aynu dhoola cadeyn karno qof wajigiisa? Oh, Haa! Ma aadan…
Waa maxay qiimaha hadda ee ALX Coin sanadka 2022 | Dib u Eegid Buuxda
Cryptocurrencies ayaa kordhay tiro badan. Laga bilaabo 2010, kaliya bitcoin ayaa jiray, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kuwo kale oo badan…
QAABKA IYO KOOBAN EE WAXYAABAHA BARASHADA
Dukumeentigani waxa uu ka kooban yahay kala qaybsanaanta qaabka Tusmada Cilmi-baadhista. Macluumaadka cilmi-baarista waxaa ka mid ah mowduucyo ku saabsan; 'Sidee,...